musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » Vashanyi veIndia vanofanirwa kutsvakwa zvakanyanya
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kurwisa • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • India Kupwanya Nhau • Nhau Dzakanaka • misangano • nhau • vanhu • Rail Kufamba • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • Shopping • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Vashanyi veIndia vanofanirwa kutsvakwa zvakanyanya.
Kukura mukati mehupfumi hweIndia kuchabatsira zvakananga mukusimudzira kwehuwandu hwepakati, zvichikonzera kuwedzera hupfumi uye mari inoraswa kwemakore anotevera.
Kusimudzirwa kwekushanya kunowanzo kubudirira mukusimudzira hupfumi, uye ramangwana reIndia rinotaridzika rakajeka.
Kuvandudza zvivakwa zveIndia uye kugadzira musika wendege wemutengo wakaderera zvinoreva kuti kufamba kwekunze kunokwanisika uye kunowanikwa.
56% yemaIndia akati 'kukwanisa' uye 'kuwanikwa' ndizvo zvakakosha pakutenga zororo.
Indian vashanyi vachave vamwe vevafambi vanodiwa zvakanyanya, vachipihwa hupfumi hweIndia huri kukura, huwandu hwevanhu vadiki uye vari pakati nepakati, sekureva kwevanoongorora indasitiri yekufambisa. Nyanzvi idzi dzinoona kuti nyika inotarisirwa kusvika nzendo dzinosvika miriyoni makumi maviri nepfumbamwe panosvika 29 - maonero akajeka achifunga nezvematambudziko eCCIDID-2025.
Denda risati rasvika, India yaive imwe yemisika yakakosha uye yakatsvakwa-kumashure yekushanya pasirese, uye yaive chinangwa chikuru chevatambi vakuru vakaita se. KushanyaBritain uye Tourism Australia.
Nepo dambudziko reCCIDID-19 richiisa kunetsa kukuru pahupfumi hwenyika uye indasitiri yekushanya, Indian travelers vanotarisirwa kunge vakagadzirira kufamba zvakare.
Hupfumi hweIndia hucharamba huchivaka pakubudirira kwahwo, mushure mekupera kwekutanga muna 2020. Zvinofungidzirwa zvazvino zvinoratidza kuti GDP yenyika yeIndia ichasvika madhora matrillion mana, 4% yakakwira kupfuura mazinga a50, zvichienderana nedata razvino.
Kusimudzirwa kwekushanya kunowanzo kubudirira mukusimudzira hupfumi, uye ramangwana reIndia rinotaridzika kupenya - kupa iyo inogona kudzivirira imwe COVID-19 kubuda uye kuvharika kunotevera. Inopa mukana wakanakisa kune vatengesi vekuenda, vanogona kukwirisa huwandu hwenyika huri kukura, hunosanganisira Gen Z uye mamireniyumu (angangoita 51%). Zvizvarwa izvi zvinoda kufamba. Zvakare, kuvandudza zvivakwa zveIndia uye kuvandudza musika wendege wemutengo wakaderera zvinoreva kuti kufamba kwekunze kunokwanisika uye kunowanikwa.
Maererano neongororo ichangobva kuitika, makumi mashanu nenhanhatu muzana emaIndia akati 'kukwanisa' uye 'kuwanikwa' ndizvo zvinhu zvakakosha pakutenga zororo. Izvi zvinosimbisa kuti nyore, inodhura-inoshanda mhinduro dzekufamba ndiyo nzira yekumberi.
Kuwedzera kwekudyara kweIndia mubhajeti rendege, pamwe nekuvandudza zvivakwa zveairport, zvinoreva kubatana kuri nani kubva kumatunhu nenhandare huru dzendege. Naizvozvo, kufamba kune dzimwe nyika kuchava kwakatwasuka uye kwakachipa Indian travelers. Izvi zvichave zvakakosha mukubudirira kweIndia munguva yemashure-denda.
Parizvino, bhajeti reIndia indasitiri yendege yakawedzera zvakanyanya mumakore gumi apfuura pamwe nehupfumi hwayo. Muna 2016, yakapfuura vatakuri vesevhisi yakazara nehuwandu hwezvigaro zvevatakuri zvakatengeswa, uye inoverengera 51% yevatyairi vese veIndia kubva muna 2021.